कोभिड–१९ः पहिलोभन्दा दोस्रो लहर घातक – कर्णाली 24 डट कम
Karnali 24२७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार ०९:०८
काठमाडौं, जेठ २७ । कोभिड–१९ को दोस्रो लहर पहिलोको तुलनामा एक सय प्रतिशतभन्दा बढी आक्रमक र घातक देखिएको छ ।
नेपालमा कोभिडको पहिलो लहर झन्डै १५ महिना ९२०७६ माघ १० देखि० चलेको थियो । दोस्रो लहर २०७७ चैत अन्तिम सातादेखि सुरु भएको मानिएको छ । २०७७ चैत २५ लाई पहिलो लहरको अन्तिम दिन र त्यसपछिलाई दोस्रो लहर मानेर हेर्दा कोभिडबाट संक्रमित र मृत्युको यो भयावह तस्बीर देखिएको हो ।
त्यस्तै, कोभिडबाट संक्रमितमध्ये दोस्रो लहरमा मुत्यु हुनेको संख्या झनै धेरै छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कोभिडको पहिलो लहर ९गत चैत २५ सम्म० मा ३ हजार ३८ जनाको ज्यान गएको थियो । तर दोस्रो लहरका दुई महिनामा गत चैत २५ यता यो संख्या बढेर ७ हजार ९ सय ९० पुगेको छ । दुई महिनामा ४ हजार ९ सय ५२ जनाको मृत्यु भएको छ । यो संख्या पहिलो लहरको तुलनामा १ सय ६३ प्रतिशतले बढी हो ।
सरकारले नेपालमा कोभिडका कारण हुने कुल मृत्युदर १।६ प्रतिशत रहेको बताएको छ । दोस्रो लहरले सबैभन्दा बढी प्रभावित मानिएको छिमेकी भारतमा यो दर १.२२ प्रतिशत छ ।
वैद्यका जस्ता बोली फेरि नदोहोरिऊन्.. देशले
३० जेष्ठ २०७८, आईतवार ०६:४७
६ असार २०७८, आईतवार ०८:२१
रेखा थापाले अहिले देशको राजनीतिमा कुहिएका आलुहरु रहेको बताए।
२३ जेष्ठ २०७८, आईतवार १८:१४
नेपाली युवाले गरे जापानको सडकमै शरिर चिरेर आत्माहत्याको प्रयास।
२१ चैत्र २०७७, शनिबार १८:१७
गायिका इन्दिरा जाेशिले काे संग गरिन् सुटुक्क इन्गेजमेन्ट? २७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार ०९:०८
चितवनमा माेटरसाईकल “ग्राहकको मागअनुसार ब्राण्ड, रङ्ग, मोडल खोजी खोजी चोरी २७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार ०९:०८
यस्तो हत्यारालाई के गर्नुपर्छ? ‘टाउको, घुँडाभन्दा तल र कम्मरभन्दा माथिको भाग अझै भेटिएको छैन्:प्रहरी २७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार ०९:०८